कार्यस्थल विवादहरूको समाधान - नेपाली - भाषिक मद्दत - Fair Work Ombudsman
कार्यस्थलमा कुनै मामिला वा समस्या समाधानमा तपाईंलाई सहयोग आवश्यक छ? कार्यस्थलको समस्या समाधानका लागि तपाईंले पालना गर्न सक्ने केही कदमहरू यहाँ छन्ः
चरण 1: समस्याको पहिचान गर्नुस्
चरण 2: कानूनको जाँच गर्नुस्
चरण 3: कार्यस्थलमा समस्या समाधान गर्दा
चरण 4: सहयोगका लागि हामीलाई सोध्नुस्
चरण 1: समस्याको पहिचान गर्नुस
यदि तपाईंलाई सही भुक्तानी दिइएको छैन वा काममा तोकिएका सर सुविधा दिइएको छैन भन्ने लाग्छ भने, के के कारणले त्यसो भएको हो बुझ्नु जरूरी हुन्छ। तपाईंले विश्वास गर्ने साथी वा सहकर्मीसँग समस्या के हो भन्ने पहिचान गर्न, र यसलाई समाधान गर्ने आवश्यकता छ छैन भन्ने विषयमा कुरा गर्दा सहयोग पुग्न सक्छ।
जति सक्दो चाँडो समस्याको हलको लागि काम गर्नु जरूरी छ ता कि समस्या चर्कँदै नजाओस।
चरण 2: कानूनको जाँच गर्नुस
कामका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने सजिलो तरिका तपाईंले कानूनलाई पालना गरिरहेको निश्चित गर्नु हो।
निम्न विषयबारेको कानुन जाँच्नुहोस्ः
तलब भर्पाइ र रेकर्ड राख्ने
तिरिनुपर्ने न्यूनतम तलब दर, जरिवाना तथा भत्ताहरूको हिसाबकिताब गर्न तपाईंले हाम्रो अनलाइन तलब क्यालकुलेटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण 3: कार्यस्थलमा समस्या समाधान गर्द
एकपटक तपाईंले समस्याको पहिचान र कानूनी व्यवस्था के छ भनेर यकिन गरिसकेपछि , समस्याबारे कामदार वा रोजगारदातासँग कुरा गर्नलाई समय मिलाउनुहोस्। तपाईंले कुरा गर्न चाहेको समस्याबारे जानेर तपाईंले यस छलफलका लागि तयार गर्नुपर्छ। समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकाका लागि केही सुझावहरू तयार गर्नु पनि सहयोगी हुन्छ।
कार्यस्थलका समस्यालाई समाधान गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्, जसमा यि कुराहरू समावेश छन् :
कार्यस्थलको सुविधाको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने
पाउनुपर्ने हकअधिकारको भुक्तानी
सान्दर्भिक नीति तथा प्रकृयाहरूलाई अद्यावधिक गर्ने
प्रशिक्षण उपलब्ध गराउनु
यदि तपाईं आफ्नो रोजगारदाता वा कामदारसँग कुरा गर्ने कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो समस्यालाई लिखितरूपमा उठाउने चाहना राख्न सक्नुहुन्छ। निम्न कुरा याद गर्नुहोस्ः
स्पष्टसँग समस्याको खाका तयार गर्नुहोस्
यदि रकम लिन बाँकी छ भने, कति रकम र के का लागि भन्ने तोक्नुहोस्।
तपाईंले गर्नुभएका अघिल्ला छलफलहरूलाई सिफारिस गर्नुहोस्।
तलब भर्पाइ वा यस वेबसाइटमा भएका वा अन्य स्रोतको जानकारीलाई छापा माध्यमबाट गरिएका प्रिन्टजस्ता समर्थक सूचना संलग्न गर्नुहोस्।
तपाईंको रोजगारदाता वा कामदारलाई प्रत्युत्तर पठाउन समय दिनुहोस्।
चिठी वा ई-मेलको एक प्रति आफूसँग राख्नुहोस।
चरण 4: सहयोगका लागि हामीलाई सोध्नुस
यदि तपाईंले माथिको कदमहरूको पालना गर्नुभएको छ भने र तपाईंले अझसम्म पनि समस्या समाधान गर्नसक्नु भएको छैन भने, कामदार तथा रोजगारदाता दुवैलाई उनीहरूको कार्यस्थलको सुविधाबारे जानकारी तथा सुझाव दिएर हामी सहयोग गर्न सक्छौँ।
हामीसँग मद्दत माग्नका लागि, My account (मेरो खाता) बाट अनलाइन सोधपुछ गर्नुहोस् र तपाईंको कार्यस्थलको समस्या हामीलाई बताउनुहोस्।
यदि तपाईंको हामीसँग पहिले नै खाता छ भने, अब सोधपुछ फारम मा जानुहोस्।
के तपाईंको हामीसँग अहिलेसम्म कुनै खाता छैन? आफ्नो जिज्ञासा पठाउन मेरो खाता My account मा दर्ता गर्नुहोस्, तब ‘मेरो सोधपुछ’ (My enquiries) मा क्लिक गर्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई दोभाषे चाहिन्छ भने, तपाईंले अनुवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS) लाई 131 450 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ- हामीसँग तपाईंको भाषामा निशुल्क कुरा गर्नका लागि समय मिलाउन। टेलिफोन अपरेटरलाई आफूले बोल्ने भाषा बताउनुहोस् र उनीहरूलाई 131 394 मा हामीलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुहोस्।
तपाईं रूचि यसमा पनि हुनसक्छ
Page reference No: 7471
Saved from fairwork.gov.au on 24/09/2021 3:25:53 PM